သင့် iPhone ကိုမျက်နှာဖုံးနှင့် Apple Watch ဖြင့်သော့ဖွင့်နည်း | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Louis padilla | | iOS 14, သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
မှလာမည့် update ကို iOS 14.5 သည်သင့် iPhone ကိုမျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ထားရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် သင်၏ Apple Watch မှလုံခြုံရေးကုဒ်ကိုထည့်စရာမလိုပဲ ၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ ၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှင်းပြသည်။
ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုစတင်ကတည်းက Face ID သည်လုံခြုံမှုနှင့်အဆင်ပြေမှုအတွက်အကောင်းဆုံးသော့ဖွင့်ခြင်းစနစ်မှသည်အမှန်တကယ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့မျက်နှာတစ်ဝက်ဖုံးထားသောအခါလုံးဝအသုံးမကျသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံး iOS 14.5 ရောက်လာသည့်တိုင်အောင်ဗားရှင်းသည် developer များအတွက်ပထမဆုံး Beta ကိုထုတ်ပေးသည် မျက်နှာဖုံးတပ်ထားသည့်အခါသင့် iPhone ကိုသော့ဖွင့်ရန်သင့်အား Apple Watch ကိုအသုံးပြုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲ? ၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုဘာတွေလဲ? ဒီဗီဒီယိုထဲမှာအရာအားလုံးကိုခင်ဗျားကိုရှင်းပြပါမယ်။
2 တစ် ဦး ကအဆင်ပြေခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းစနစ်
ပထမဆုံးလိုအပ်တာကငါတို့လိုပဲ iPhone နှင့် Apple Watch တို့ကို iOS 14.5 နှင့် watchOS 7.4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည် ရေးသားသည့်အချိန်တွင် developer များသာရရှိနိုင်သော Beta 1 ၌ရှိသည်။ ဤနောက်ဆုံးထွက်မွမ်းမံမှု၏နောက်ဆုံးမူကွဲသည်အချိန်များစွာမယူသင့်ပါ၊ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူအားလုံးရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်သင်၏စက်ချိန်ညှိချက်များတွင်ပေါ်ပါမည်။ သင်ဤဗားရှင်းကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင့် iPhone သည်မျက်နှာဖုံးပေါ်၌ပင်သော့ဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ဤစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်သင်ပိုမိုလိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
iPhone နှင့် Apple Watch တို့သည် WiFi နှင့် Bluetooth နှစ်ခုလုံးဖွင့်ထားရမည်။
Face ID menu ရှိ iPhone Settings ထဲမှ "Apple Watch with Unlock with" option ကိုကျွန်ုပ်တို့ activate လုပ်ရမည်။
ကိရိယာနှစ်ခုလုံးကိုအမြင့်ဆုံးမီတာ (၂ မီတာ) အကွာတွင်ထားရမည်။
Apple Watch သည်သော့ဖွင့်ကုဒ်ရှိရမည်။ ၎င်းသည်သော့ဖွင့်ပြီးငါတို့လက်ကောက်ဝတ်တွင်ရှိသည်။
ဤလိုအပ်ချက်များအားလုံးနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ကိုမျက်နှာဖုံးတစ်ခုဖြင့်သော့ဖွင့်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၊ သော့ဖွင့်ကုဒ်၏ကြောက်မက်ဖွယ်မြင်ကွင်းသည်ပေါ်လာတော့မည်မဟုတ်။ iPhone Watch က Apple Watch နဲ့သော့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာကိုငါတို့မြင်နေရပြီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Apple Watch တွင်ဤအချက်ကိုညွှန်ပြသည့်အသိပေးချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ နာရီရဲ့ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ iPhone ကိုသော့ဖွင့်ဖို့မလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဖုန်းကိုပိတ်ထားနိုင်မှာပါ။
တစ် ဦး ကအဆင်ပြေခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းစနစ်
အသုံးပြုသူသည်၎င်းကိုစတင်လုပ်ဆောင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဤစနစ်၏လည်ပတ်မှုသည်အတော်လေးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ သင်ကမျက်နှာဖုံးနဲ့စမ်းကြည့်ရုံနဲ့သင့် iPhone Watch ဟာ Apple Watch လိုတစ်ချိန်တည်းမှာဘယ်လိုသော့ဖွင့်ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ် သော့ခတ်သံနှင့်၎င်းသည်သင်၏လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်တွင်တုန်ခါနေသည်။ သို့သော်၊ ဤသော့ဖွင့်ခြင်းစနစ်သည်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိစေရန်အလုပ်မလုပ်သောအခြေအနေများရှိသည်။
iPhone ကို restart လုပ်တဲ့အခါမှာ Face ID ကိုအသုံးမပြုခင် unlock code ကို Apple Watch နဲ့အရင်ဖွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။
အကယ်၍ Apple Watch သည် ၂ မီတာအကွာအဝေးတွင်ရှိသည်ဆိုပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား unlock code တောင်းခံလိမ့်မည်။ Face ID သို့မဟုတ် Apple Watch နှင့်သော့ဖွင့်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မဝင်မှီတိုင်အောင်ထပ်မံအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍သာ Apple Watch တွင်ပေါ်လာသည့်အသိပေးချက်အားဖြင့် iPhone ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိတ်ဆို့ပါက Face ID နှင့် Apple Watch နှင့်သော့ဖွင့်ခြင်းတို့အတွက် code ကိုကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ရမည်။
သူက Sleep mode နဲ့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
၎င်းသည်အဝေးမှပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ပါ။ တစ်နေ့ကိုနာရီပေါင်းများစွာမျက်နှာဖုံးစွပ်ကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသက်သာမှုတစ်ခုပဲ။ ဒါပေမယ့် Apple ကိုယ်တိုင်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့လုံခြုံရေးပြareနာတွေရှိတယ်။ တကယ်တော့ Apple Pay နှင့်ငွေပေးချေရန် Apple Watch နှင့်ဤသော့ဖွင့်မရပါ Face ID ဖြင့်ကာကွယ်ထားသော application များကိုဖွင့်ရန်၊ iCloud Keychain ကို သုံး၍ စကားဝှက်များကိုမဖြည့်ရန်ကျွန်ုပ်၏ iPhone ပေါ်တွင်ရှိသည်။ စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့ပြproblemနာကတစ်ယောက်ယောက်ကငါတို့ဖုန်းကိုယူပြီးနှစ်နာရီလောက်အကွာမှာဖွင့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ အဖြေကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်။ ၎င်းတွင်ကောင်းမွန်သောပုံနှိပ်စာလုံးများများစွာရှိသော်လည်း၎င်းကိုသော့ဖွင့်ထားသည်။ အခြားသူတစ် ဦး သည်မျက်နှာဖုံးဝတ်ဆင်ရမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့လည်းပါ ၀ င်သည်၊ iPhone နှင့်၎င်းကိုအချို့သောအချိန်တွင်ဖွင့်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်အလွန်နီးကပ်ရမည်။ အိုင်ဖုန်းသော့ဖွင့်သောအခါ Apple Watch မှအသံသို့မဟုတ်တုန်ခါမှုကိုကျွန်ုပ်တို့သတိမပြုမိပါ။ ။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်သော့ဖွင့်ခြင်းစနစ်အသစ်ကိုပထမဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့သော Beta ဖြစ်သည် အနာဂတ်ဗားရှင်းတွေမှာတိုးတက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဥပမာမျက်နှာဖုံးတစ်ဝက်ဖတ်ပြီးမျက်နှာဖုံးစွပ်သူမည်သူမဆိုမဖွင့်နိုင်အောင်ဖြစ်သည်။ ဒီတိုးတက်မှုတွေနဲ့တောင်မှငါကနောက်ဆုံးနိဂုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအဖြေတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးထင်နှင့် Apple သေချာပေါက်သည်အခြားရွေးချယ်စရာများအပေါ်မျက်နှာဖုံးပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဤအချိန်အတောအတွင်း, ငါက၎င်း၏ရည်မှန်းချက်ပြည့်စုံပြည့်စုံထင်, ဒီဖြေရှင်းချက်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 14 » သင့် iPhone ကိုမျက်နှာဖုံးနဲ့ Apple Watch နဲ့သော့ဖွင့်နည်း
iOS 14.5 code တွင် "Apple Card Family" အသစ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်
12x17 Podcast: iOS 14.5 နှင့် Subscriptions